Home » Music » နားဦးတည့်ရာ တစ်ဆယ့်သုံး – Billy Joel (The Stranger)
Billy Joel (The Stranger)
ဒီ သီချင်းက ထူးအိမ်သင်ရဲ့ “တစိမ်းဆန်ဆန်” ရဲ့ မူရင်း ပါ။
ဒီ စကား နှစ်ခု ဟာ ကွာ တယ်လို့ ထင်ကြ ရဲ့လား။
ဒီမှာ ထူးအိမ်သင် ရဲ့ သီချင်းပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ပါရှင့် မဟာ ကွန်ဆားဗေးတစ် သူကြီးမင်း။
သို့ပေမဲ့ ရှင် သန်ရာ ဘက် ကို လှမ်းဆွဲဆောင် မယ် မတွေး နဲ့။ မလိုက်ဘူး။ lol:-))))
အာဃာတ အမုန်းတရား တွေ ဖယ်ပြီး အားလုံး ကြိုးစား ကြရအောင်ပါ။
Billy Joel က Uptown girl မူရင်းအဆိုရှင်​လား
Yes. He is. :))
နောက်ပိုင်း Westlife ပြန်ဆိုထားတာ။
Arr ya… ya …ya .. :))
Westlife က ​တော့ အချစ်​​ဟောင်း​တွေမို့ အကုန်​ကြိုက်​။ဒါ​ပေမယ့်​ ပြန်​ဆို​တွေများ​နေမှန်းကြီးမှ သိသိလာတာ flying without wings ကလည်းပြန်​ဆိုပဲ။
ma ti bu bya
တစိမ်း ဆိုလို့.. မြန်မာ သတ်ပုံ မြန်မာစာ စကား မှာ…
အများက လဲ ရိပ်မိ လာပြီမို့ သူတို့ မပြင်နိုင်ရင် သူတို့ ကို ထုတ်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားရလိမ့်မယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရူပါကတော့ ဖြောင့်သားကိုး။
မဆိုးပါဘူး။ Flexible ဖြစ်ပါတယ် ဆက်ဆက် ရဲ့။ :))
ရေးဖူးတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် သတိရမိသွားလို့ တင်လို့တာ စိတ်မဆိုးနဲ့နော် ဒေါ်လေးမြ
မှံအိ.. ဒါကြောင့် အချို့ မြန်တျန့်မတွေ ပေါဒါ.. လစ်ဗင်းတူဂဲဒါ မြန်တျန့်နဲ့မထား.. ဒဇိမ်း လူမျိုးခြားနဲ့ ထားအိဒဲ့.. များဒေါအားဖြင့်တော့ အဖြူ မယပါဘူး… ပဲနဲ့အမည်း ဖျစ်ကုံဒါမြားအိ။ မြန်တျန့်ထီးကြတော့ ပဲမ၊ အမည်းမဂတောင် ဆိတ်မဝင်ဇားတော့ အရိုးကိုစည်းရိုးထိုး ကိုယ့်အမြိုးပဲ ခြစ်ပြရတာပဲ.. ခွီး..
ကိုယ်မှာ မျက်နှာဖုံးတင် မက မျက်နှာတွေလည်း အများဂျီးရယ်။
၂ ပုဒ်လုံး ဒေါင်းနေတယ် အခု
အဲ့ဒါကိုကပဲ အတွေ့အကြုံခေါ်သလား ရင့်ကျက်မှုခေါ်သလားပဲ
စိမ်းလွန်းတဲ့ မျက်နှာဖုံးဆိုသော်ငြား ရွေးချယ်စရာမရှိအောင် ဖြစ်နေမှတော့ အံဝင်အောင် ကြိုးစားတပ်ရမှာပေါ့
xenophobia က​တော့ နိုင်​ငံခြားသားကို​ကြောက်​တာတဲ့ ပြုပြင်​​ပြောင်းလဲရမှာ ​ကြောက်​တာကျ​တော့ ဘယ်​လို​ခေါ်မလဲ ???